Ahoana ny fampiasantsika ny fitaovana sosialy eo amin'ny toeram-piasana | Martech Zone
Ao amin'ny fanadihadiana iray avy amin'i Microsoft ao amin'ny Fampiasana sy fiheverana fitaovana sosialy ao amin'ny orinasa, hita fa mbola nanafina izy ireo porofo bebe kokoa fa ny vehivavy dia marani-tsaina kokoa noho ny lehilahy.
Ny lehilahy dia mety kokoa noho ny vehivavy no milaza fa noho ny olana ara-piarovana ireo fameperana ireo, ary ny vehivavy kosa dia manome tsiny kokoa ny fahaverezan'ny vokatra.
Ugh. Mampalahelo tokoa fa, aorian'izay, mbola manana olona vitsivitsy any amin'ny toeram-piasana ihany isika manala ny fahaizana hiarahan'ny mpiasa miasa, mikaroka ary manatsara ny famokarany. Ny tsy fanekena ny zava-misy fa, amin'ny alàlan'ny tamba-jotra sosialy, azonao atao ny miditra amin'ny namana, matihanina, mpivarotra ary manam-pahaizana dia tsy mahamenatra ankehitriny. Ary raha tsy hoe manana mpiasa tsy maintsy mamela ny finday findainy finday ao anaty fiarany ianao dia mahazo miditra amin'ny media sosialy. Raha manararaotra izany izy ireo, ny valiny dia tsy ny fanakanana ny fidiran'ny tsirairay… ny valiny dia ny fandroahana ilay mpiasa.
Tags: Microsoftfamokaranahaino aman-jery sosialyfifaneraseranafianarana any am-piasana
9 Jun 2013 amin'ny 11:30 AM
Douglas, tsara be izany! Izaho dia nitady lahatsoratra niaraka tamin'ny fihodinan'ny haino aman-jery sosialy ho an'ny Lahatsoratra bilaogy 4 HR isan-kerinandro (ireo tiako indrindra amin'ny herinandro) ary tena hampiditra an'ity iray ity. Misaotra nizara ny vaovao.